रमजानमा रोजाको महत्व - BirtaJyoti
रमजानमा रोजाको महत्व
super userApril 5, 2022 7:12 am 0
एजाज अहमद अन्सारी
ईस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजान सुरु भएको छ ।पवित्र महिना रमजानमा ईस्लाम धर्मावलम्बीहरू एक महिनासम्म रोजा व्रत बसी इबादत अल्लाहसँग प्रार्थना र आफूले गरेको गल्तीको पश्चाताप गरी क्षमायाचना माग्ने चलन रहिआएको छ ।
रमजानमा गरिब परिवारमा दान दक्षिणा सदका जकातसमेत दिइने चलन छ । जामिया सिराजुलवलुम अलसल्फिया झण्डानगरको रमजान महिनामा रोजा बस्ने समयसरणीअनुसार यसपालि लगभग १४ घण्टा निराजल व्रत राख्नुपर्छ ।
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका विभिन्न सहरमा रमजान महिनाको चन्द्रदोदय देखिएका कारणले नेपालमा पनि यस वर्ष चैत १९ गते तराबिह नमाज पढ्ने र चैत २० गतेदेखि व्रत बस्ने गरिनेछ ।
हिजिरी सम्बत (अरबी पात्रो) अनुसार मंगलमय (भलाईको) महिना रमजान हो । यो नबौँ महिना हो जुन २९ वा ३० दिनको हुने गर्दछ । हिजिरी सम्बत चन्द्रमास अनुसार चल्ने भएकाले यसका सबै महिनाहरु २९ वा ३० दिनकामात्र हुने गर्दछन् । औंसी पछिको पहिलो चन्द्रोदयदेखि महिनाको दिन गणना शुरु हुने गर्दछ । रमजान महिनालाई पवित्र र मंगलमय ठहर गर्नुका कारण अल्लाह तआलाले यसै महिनामा कुरआन लगायत आकाशीय ग्रन्थहरु अवतरित गर्नु हो । अल्लाहले हजरत इब्राहीम (अलै)लाई यसै महिनामा सहिफा (लिखित पाना) प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै हजरत दाउद(अलै.)लाई यसै महिनाको १२ वा १८ तारिखमा जबुर दिएका थिए भने हजरत मुसा(अलै.) माथि अल्लाहले यसै महिनाको ६ तारिखमा तौरात अवतरित गरेका थिए । त्यसैगरी हजरत ईशामाथि यसै महिनाको १२ वा १३ तारिखमा इन्जिल अवतरित गरिएको थियो । मानव जीवन विधानको रुपमा अल्लाह तआलाले नबी मुहम्मद (स.)माथि पवित्र कुरआनको अवतरणको शुरुवात यस महिनाबाट गरेका थिए । अल्लाहका फरिश्ता जिब्रइल यसै महिनामा दुईपटक अल्लाहका सन्देष्टा मुहम्मद(स.) समक्ष आएर कुरआन सुन्ने र सुनाउने कार्य गरेका थिए ।
सामान्यतया हामीले देखे, सुने र भोगे अनुसार कुनै पनि कानुनको आवस्यकता जुन बेला हुन्छ त्यसैबेला त्यो तयार गरिन्छ र त्यसलाई तत्काल लागु पनि गरिन्छ । यदि कानुन निर्माण गर्ने बित्तिकै लागू गर्न सकिएन भने त्यो प्रभावकारी बन्न सक्दैन र त्यसबाट मानिसले लाभ हासिल गर्न पनि सक्दैनन् । यस्तो मानव निर्मित कानुन कुनै निश्चित क्षेत्र वा राष्ट्रको लागि हुने गर्दछ र चाहेको समयमा त्यसलाई सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सकिन्छ किनकि यस्तो कानुन मानिसको स्वविवेक, इच्छा र आवस्यकतालाई मध्येनजर राखी बनाइएको हुन्छ । समय र परिस्थितिमा परिवर्तन हुँदा उक्त कानुन वा संविधान उपयोगबिहीन बन्न पुग्छ । कुनै एक राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार बनाइने यस्तो कानुन त्यस देशको लागि उपयोगी र लाभदायक भए पनि अर्को राष्ट्रको लागि उपयोगि नहुन सक्छ । त्यसैले दोश्रो देशमा सो कानुन अमान्य वा अस्वीकार्य हुन्छ । तर जे जसो भए पनि कुनै कानुन जुन समयमा बन्छ त्यसै समयमा लागु हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । समय र आवश्यकता परिवर्तन हुन साथ लाभहीन बन्न पुग्ने र परिवर्तनको आवस्यकता पर्ने मानव निर्मित संविधान वा कानुनप्रति त मानिसको रबैया यस्तो हुन्छ अर्थात कानुन बन्ने बित्तिकै लागु गरिन्छ भने कुरआन त अल्लाहको कानुन हो जुन अपरिवर्तनीय वा परिवर्तन गर्न आवस्यक नपर्ने प्रकृतिको छ ।
मानवको मार्गनिर्देशनको लागि उसका सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर स्पष्ट जीवन दर्शनयुक्त इश्वरीय कानुन कुरआन हो । यसमा मानिसको सम्पूर्ण जीवनको कार्य दिशा र जीवन व्यवस्थाको निर्देशन र शिक्षा रहेको छ । मानिसले गर्न हुने वा नहुने, असल वा खराब, पाप वा पुण्यका कर्महरुको बारेमा यसले स्पष्ट पारेको छ । अल्लाहले फरिश्ता जिब्रइलको माध्यमबाट मुहम्मद (सं) माथि अवतरित गरेको यस मानव विधान कुरआनमा सांसारिक कुनै पनि मानवीय क्रियाकलापहरुको मार्ग छुटेको छैन । मानिसको जीवनमा आइपर्ने आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, युद्ध, सम्झौता, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरु कसरी संचालन गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन कुरआनले स्पष्ट रुपमा दिएको छ । असल कार्यबाट प्राप्त हुने लाभ, कल्याण र पूण्य तथा खराब कार्यबाट भोग्नु पर्ने पिडा, हानी र यातनाको उदाहरण समेत दिएर यसले मानिसलाई असल कार्य गर्न उत्पे्ररित र खराब कार्यबाट सचेत गरेको छ ।
मानिसको अल्पकालिन सांसारिक जीवन र मृत्युपर्यन्तको अनन्तकालिन जीवनलाई सुखमय बनाउन दिशा निर्देशन गर्ने एक मात्र कानुनको अवतरणको प्रारम्भ रमजान महिनाबाट नै भयो । कुरआन रमजान महिना मै अवतरित भएको र त्यसै महिनालाई अनिवार्य रोजाको महिना बनाइएको कुरा स्वयम् कुरआनले नै प्रमाणित गरेको छ । कुरआनमा भनिएको छ– “रमजानको महिना त्यो महिना हो जसमा कुुुुरआन अवतरण गरियोस यो मानव जातिकालागि मार्गदर्शन हो र यसमा सत्मार्गकोलागि र सत्य तथा असत्यबिच फरक छुट्याउने स्पष्ट प्रमाणहरू छन् । अतः तिमीहरूमध्ये जसले यस महिनालाई पाउँछ उसले अनिवार्यरूपमा यसको ब्रत राखोस् र जो बिरामी छ वा यात्रामा छ उसले अरू दिनहरूमा ब्रत राखी त्यसको गन्ती पूरा गरोस् । अल्लाह तिम्रोलागि सुबिधा चाहन्छन्स तिमीहरूलाई कष्टमा पार्न चाहँदैनन् ताकि तिमीहरूले संख्या पूरा गर । र, उनले जुन सीधा मार्ग तिमीहरूलाई देखाएका छन् त्यसकालागि अल्लाहको स्तुति गर । आशा छ कि तिमी कृतज्ञ बन्नेछौ ।” ९कुरआन २ ः १८५०
मानिसको सुख सुबिधाको लागि प्रलयको दिनसम्मको लागि सृष्टिकर्ता, पालनहार, रक्षक, दयावान अल्लाहको तर्फबाट पठाइएको कानुन नितान्त प्राकृतिक र परिवर्तनको आवस्यकता बिहीन छ । यो जुनसुकै काल, परिस्थिति र स्थानको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ । यो रमजान महिनामा अवतरित भएकोले त्यसै महिनामा लागु गर्नुको विकल्प थिएन र अल्लाह तआलाको त्यही आदेश भयो पनि । त्यसैले अल्लाहले धैर्यता आत्मसंयमता र दयालुताको परीक्षाको रुपमा रोजालाई यसै महिनामा अनिवार्य गरे । कुरआन अवतरणको महिना रमजान भएकाले यो सबभन्दा पवित्र महिना हो । त्यसैले सबभन्दा पवित्र महिना नै रोजा अनिवार्य हुनु उचित हुन्थ्यो र त्यसै अनुसार भयो पनि । जसरी अन्धकार रातको अन्त्य र बिहानीको शुरुवातसँगै रोजा शुरु हुन्छ त्यसरी नै लामो समयको अन्धकार र पथभ्रष्टतापूर्ण समयको अन्तसँगै नयाँ बिहानीको चम्किलो प्रकाशको रुपमा कुरआनको अवतरण रमजान महिनाबाट भयो । नयाँ बिहानीको चम्किलो प्रकाश बोकेर आएको यस रमजान महिनाका दिनहरुलाई रोजाले र रातहरुलाई उपासनाले सुसज्जित पार्नु सर्बथा उचित थियो । त्यसैले अल्लाहले दुई हिजिरीदेखि रमजान महिनालाई अनिवार्य रोजाको महिना घोषित गरिदिए ।
त्यस्तै रमजान महिना नै त्यो महिना हो जसमा नबी(स.) सबभन्दा बढी कुरआन पाठ गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ त्यसै महिनामा सबभन्दा उदार र सत्कर्मी बन्नुहुन्थ्यो ।
रमजानको महिना अल्लाह सर्वशक्तिमानको नजरमा धन्य महिनाहरू मध्ये एक हो। यो महिना धार्मिकता र शुद्धीकरणको महिना हो, प्रशिक्षण र शुद्धीकरणको महिना हो, दया र क्षमाको महिना हो। कुरआनमा, यो महिनालाई मानव इतिहासको सबैभन्दा पवित्र महिनाको रूपमा मान्यता दिइएको छ। पवित्र कुरआन यस महिनाको धन्य रातमा अवतरण गरिएको छ। यो पुस्तक जुन मार्गदर्शनको पुस्तक हो, भलाइ र आशीर्वादको पुस्तक हो, समृद्धि र मुक्तिको पुस्तक हो। रमजान महिनाको विशेषताहरू र कुरआनको विशेषताहरू र यसबाट हामी रमजान र कुरआनको बीच सम्बन्धको सान्दर्भिकता बुझ्न सक्छौं। त्यसैले रमजानको महिनालाई कुरआनको महिना पनि भनिन्छ। यो महिनाको रात जसमा कुरआन अवतरण गरिएको थियो हजार महिनाको रात भन्दा राम्रो छ। यस रातमा, अल्लाह सर्वशक्तिमान स्वयं आफ्नो सिंहासनबाट पृथ्वीमा अवतरण गर्नुहुन्छ र क्षमा खोज्नेहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो रातलाई पूर्ण शान्ति र सुरक्षाको रात भनिएको हो ।
यसमा फरिश्ताहरू एवं आत्मा (जिब्रइल) आफ्ना पालनकर्ताको आदेशले हरेक कार्य सम्पादनकोलागि ओर्लने गर्छन् ।
यो (रात)प्रातःकालको आगमनसम्म शान्ति नै शान्ति हुन्छ । ईस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजानको आईतवार देखि पहिलो रोजा (सौम÷ब्रत)भएर शुरु भएकोमा सम्पूर्णमा रमजानको को मुबारकबाद ।हे अल्लाह म आभार प्रकट गर्द्छु कि फेरी पनि एक पटक तरावीह को नमाज र रोजा राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो ।
साथै महिनाभरि तरावीहको नमाज र रोजा राख्ने शक्ति प्रदान गरिदिनुस आमिन सुम्म आमिन ।
बीरु दर्नाल राज्य एकीकरणमा विसे नगर्चीको पहिलो योगदान थियो र उनी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका आर्थिक ... Read More
रामप्रसाद ढुंगेल झापाली पत्रकारिता क्षेत्रमा एक समयको लोकप्रिय, विश्वसनीय र सर्वपक्षीय साप्ताहिक विर्ता ज्योतिको प्रकाशक र प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी मेरा पत्रकार मित्र तुलसीप्रसाद निरौलाले ... Read More
NEWER POSTजि एमओ धान
OLDER POST२४ जनाले गरे रक्तदान